39 nooc oo bilaash ah oo loogu talagalay salaanta ciida | Abuurista khadka tooska ah
In kasta oo aan horeyba uga sii gudubnay bartamihii Kirismaska, weli wali waxaa la joogaa waqtigii la diri lahaa tahniyadahaas ama la dhigi lahaa kaar hadiyaddaas oo aan u samayn doonno Habeen laba iyo tobnaad. Weli waxaa jira maalmo ka hor dhammaadka sanadkan oo kaa qaadi doona xusuus iyo sheekooyin badan.
Xitaa Habeenkii Laba iyo tobnaad waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si wanaagsan u muujino salaan qof aad jeceshahay illaa 39 xarfo oo bilaash ah Kirismaska ​​waxaan kuugu soo qaadaneynaa daabacaadan oo ku jirta Creativos Online. Waraaqaha xafladahaas oo naqshadeyntaada ka dhigi doonta mid madadaalo iyo soo jiidasho leh.
1 Candy bakooradda
2 Wareegyada kartoonka
5 Dickens Kirismaska
6 Kaarka kirismaska
7 Foosha xun
8 Waqtiga kirismaska
10 Waan jeclahay ciida masiixiga
11 Debbie Kirismaska
12 Salaanta kirismaska
13 Qoraalka Kirismaska
15 Habeen ka hor Kirismaska
16 Habeenkii Xiddigaha
18 Ka baxsan yaabab
20 Waraaqaha nacnaca
21 Habeenka krismaska
22 Sirta Santa
25 Xamaasad Xmas
27 Hambalyo Xmas
28 Waqtiga Santa
29 Font kirismaska
30 Maalinta Kirismaska
31 Qurxinta Kirismaska
32 Magaalada Iftiinka
33 Kubbadda barafka
37 Codadka Kirismaska
38 Moodka kirismaska
Una nacnac font nacnac taasina waxay qaadataa dhammaan doorka hoggaamineed daqiiqadda ugu horreysa.
Nooc qoraal ahku habboon codka caadiga ah taasina waxay noo ogolaaneysaa ku dhowaad inaan gacanta ku sawirno kartoonka.
Waa midka ugu fiican dhammaan kuwa aad ka heli doontid a qaab khaldan iyo ciida kirismaska.
Font aad loo soo sawiray oo leh dhammaan noocyada jilayaasha kirismaska taasi waxay sifiican u muujin doontaa kaararkaas salaanta.
Una Nooca ku saleysan Dickens si aad uga yaabiso kuwa aad jeceshahay, asxaabtaada iyo xiriiradaada.
Font fudud, laakiin xarrago leh hambalyo aan lahayn frill badan.
Sidii ay u ahayd isha a funaanad dhogor ah, il asal ah.
Kuwa kale isha maalmahan si gaar ah.
Asal ahaan midabada iyo sawirada la daweeyay xoogaa aan la taaban karin Toosan oo asal ah.
Waan jeclahay ciida masiixiga
Ilo sida haddii aan gacanta ku qornay midab cagaaran leh dulucda Kirismaska ​​iyo dulmar.
Ilo kale diiradda saarey sawirada aan wax kula qorno.
Ilo la waayi karo taasna waa la waayi doonaa dhoola cadee cidi ka hesho hambalyada.
Ilo aad u badan qaab xarrago leh taasna way ka sarreysaa inta kale, gaar ahaan dhammaadka qaababka qalooca.
Ilo aan macquul ahayn, laakiin taasi waxay u taagan tahay sababtaas darteed.
Habeen ka hor Kirismaska
Hadaad raadineysay Isha Bur Bur, tani waxay ku dayataa si dhammaystiran. Lagama maarmi karo dadka filim galaya.
Ilo ah in waxay u taagan tahay muujinta iyo xiddigahaas soo muuqda.
Ishaani wuxuu ina kaxeeyaa buugaagta qarniyo kahor taas oo qoraalku aad u taxaddar badnaa.
Ka baxsan yaabab
Cinwaan xarrago leh oo ah ku siin kara taabasho gaar ah kaararkaaga.
Ilo kale iyadoon faan badnayn laakiin waa maxay awood u leh inuu gaaro wadnaha ilmo kasta oo leh fariin wacan.
Sida magaceeda ka muuqata, nacnac badan farta fudud.
Font kale oo leh a codka jecel midabbada cagaar iyo guduudna leh sida jilaayaal.
Qarsoodiga Santa ayaa loo adeegaa qaabab wareegsan si wanaagsan loogu muujiyo astaamaha kirismaska.
Wax yar baa laga sheegayaa ilahaas udub dhexaad u ah barafka iyo codadka qabow.
Ilo midab keliya taas oo qurxinta Christmass qurxiyaan mid kasta oo ka mid ah xarfaha.
Ilo kale oo u heellan funaanado caadi ah xilliga qaboobaha.
Xigashadani waa lagu xardhay baraf baraf wata si looga dhigo mid sixir badan.
Barafku wuxuu qaadaa marxaladda dhexe ee warqad kasta dusheeda ka kooban ilahaan.
Ilo ay ku jirto jilayaasha santa samee warqadda qaabka ay tahay.
Sidii annaguba hadiyad samaynta, ilahan ayaa qaadaya ficilkaas laftiisa.
Ilo kale oo leh aqoonsi dheeraad ah liiska in aan maanta daabacno.
Sida haddii aan qaadanno albaabka gurigeenna, xarfahaani waxay noo keeneysaa qurxintaas xarfaha.
dheeraad ah xiddigaha sixir font Christmas.
Fudud sida mid kubada barafka.
Kuwa kale ee farta ugu quruxda badan liiska, inkasta oo u heellan tahay sawirrada.
Una asal ah oo madadaalo leh font Christmas.
U qaabeeyey sida koofiyadaha kirismaska xigasho
Codadka Kirismaska loogu talagalay farta Kirismaska.
Waxaan ku dhameysanay mid kale font kaamil ah maalmahan ee xafladaha Kirismaska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » 39 nooc oo bilaash ah Kirismaska
Qiyaastii 60 farshaxanno qurxiyo ah iyo maaskaro hore oo filimka Bright ah, oo ka baxsan dhibcaha
Jilayaasha Babina ee si weyn u muujiya astaamaha magaalooyinka adduunka